Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny tenimiafina Hotmail amin'ny fika kely | Vaovao momba ny gadget
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny lakilen'ny Hotmail izay voajirika
Na eo aza ny fiantohana lehibe fa tonga tao amin'ny mpanjifany mailaka i Microsoft, dia misy ihany ny toe-javatra sasany izay misy olona afaka mamaky ny lakilen'ny Hotmail (na ny Outlook.com vaovao), noho io antony io dia andramo hamerina azy io amin'ny alàlan'ny fomba tokana natolotry ny sonia.
Ho an'ny politika momba ny fiainana manokana sy fiarovana, Microsoft dia tsy manolotra làlana hafa mankany amin'ilay mahazatra rehefa mamerina ny tenimiafinao Hotmail, noho izany dia tokony hiezaka isika handinika lafin-javatra vitsivitsy izay tokony namboarina teo aloha rehefa nahazo ny kaonty mailaka izahay. Ankehitriny dia hiezaka ny hiteny izahay, inona no tokony hatao raha misy antony tsy ahafahantsika miditra amin'ilay serivisy.
1 Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafina Hotmail miaraka amin'ny fanampiana ara-teknika anao
2 Mampiasà mailaka fanarenana hafa
3 Hafatra amin'ny finday
Ahoana ny fomba hamerenana ny tenimiafina Hotmail miaraka amin'ny fanampiana ara-teknika anao
Dingana iray ihany no tokony hataonao amin'izao fotoana izao raha voatohintohina ny teny miafinao Hotmail ary noho izany, tsy afaka miditra na miditra amin'ny serivisy ianao. Manoro hevitra anao izahay handeha voalohany mankamin'ity rohy manaraka ity, izay ahitanao ireo safidy 3 hafa natolotr'i Microsoft anao raha ny fanarenana na famerenana ny teny miafina Hotmail anao dia ireto:
"Hadinoko ny teny miafiko"
"Fantatro ny tenimiafiko fa tsy afaka miditra"
"Mieritreritra aho fa misy olon-kafa mampiasa ny kaontiko Microsoft"
Tsy maintsy misafidy ireo safidy 3 aseho eo amin'ny efijery ianao ary efa natolotray teo aloha.
Miankina amin'ny safidy ataonao, mba hahitana ny lakilen'ny Hotmail very, adino na voajirika, dia afaka manontany anao i Microsoft:
Ny nomeraon-telefaona hisoratra anarana ao amin'ny kaonty.
Ilay mailaka hafa.
Raha nahavita nametraka an'io fampahalalana io tamin'ny kaonty Hotmail anao ianao dia afaka nanao izany mandray kaody, hafatra SMS na mailaka fanarenana ny fanalahidy Hotmail afaka segondra vitsy; Angamba ho torohevitra iray azonay atao ny manoro anao ny safidinao ny safidy fahatelo raha mieritreritra ianao fa nisy nangalatra ny teny miafinao Hotmail; Amin'ity fifantenana ity dia tsy maintsy misafidy "Hafa" ianao hametrahana famaritana kely momba ny zava-mitranga; ao anatin'ity hafatra ity dia aza adino ny mametraka adiresy mailaka hafa hifandray aminao. Raha tonga i Microsoft jereo fa misy hetsika hafahafa (amin'ny alàlan'ny adiresy IP ao anatin'ny kaontinao), dia hifandray aminao avy hatrany amin'ny mailaka navelanao ao anatin'ny hafatra amin'ity safidy farany ity.
Raha very ny fidiranao amin'ny kaonty Hotmail anao dia misy safidy maromaro hamerenana azy io. Ka azo antoka fa misy fomba sasany mifanaraka amin'izay ilainao amin'izany fotoana izany, mba hahafahanao miditra amin'ny kaonty amin'ny fotoana rehetra. Ireto misy safidy azonao atao:
Mampiasà mailaka fanarenana hafa
Ny zavatra mahazatra rehefa mamorona kaonty mailaka dia tsy maintsy manome kaonty mailaka fanampiny isika. Amin'izany fomba izany, raha sendra misy zavatra mitranga dia hanana fomba hafa hidirana amin'izany isika. Amin'ny tranga Hotmail / Outlook, matetika izy ireo no mangataka anay mailaka fanarenana, izay mety ho kaonty ao amin'ny Gmail na sehatra mailaka hafa. Raha nanadino ny tenimiafintsika isika dia tsy maintsy manindry io safidy io eo amin'ny efijery mba hidirana ny teny miafina.
Amin'ny fanaovana an'io dia haseho antsika ny efijery iray ahafahantsika misafidy ny fomba tiana hampiasaina hamerenana ny fidirana. Matetika dia matetika no mampiasa an'ity mailaka fanarenana ity. Ny zavatra hataon'izy ireo avy eo amin'ny Hotmail / Outlook, dia mandefasa kaody amin'ny kaonty mailaka voalaza. Rehefa voarainao izany dia tsy hiditra an'ity kaody ity fotsiny ianao ary afaka mahazo ny fidirana amin'ny kaonty indray. Ary angatahina aminao hamorona teny miafina vaovao momba izany. Afaka minitra vitsy dia hahazo ny fidirana aminy indray isika.
Hafatra amin'ny finday
Raha tsy manana kaonty mailaka hafa ianao, izay zavatra mety hitranga amin'ny tranga maro dia manana fomba iray hafa azo alaina ao amin'ny Hotmail. Afaka mampiasa SMS isika. Izy io dia tsy misy hafa amin'ny tranga teo aloha, ity kaody fiarovana ity ihany no alefan'izy ireo amintsika dia alefa amin'ny finday amin'ny alàlan'ny SMS. Tsy misy fahasamihafana hafa amin'io lafiny io.
Noho izany, rehefa miditra hiditra isika dia tsy maintsy mikitika ny safidy hadinoko ny teny miafiko. Nalefa tamin'ny efijery manaraka izahay, izay anolorana azy ho ara-dalàna ny fampiasana ny mailaka fanarenana. Raha tsy manana ianao, na aleonao mampiasa SMS dia mila tsindrio ny safidin'ny SMS raha mbola nampifandraisinao ny nomeraon-telefaona tamin'ny kaonty taloha. Avela handefa SMS amin'ny findainao avy eo, izay tsy maintsy hidiranao.
Avy eo ianao dia tsy maintsy mampiditra an'ity kaody ity amin'ny Hotmail, hanombohana ny fizotry ny fanarenana ny kaonty. Rehefa azonao idirana io, ny zavatra voalohany angatahina matetika dia ny manova ny teny miafinao. Ka tsy ho very intsony izany fidirana izany.
Mety hitranga fa tsy misy mifanentana amin'ny anao ny roa amin'ireo safidy roa ireo. Noho izany, azonao atao ny mampiasa safidy fahatelo. Ao amin'ny efijery izay nanamarihanay fa nanadino ny tenimiafinay izahay, dia manana ny safidy antsoina hoe "Tsy manana na dia iray aza amin'ireo fitsapana ireo aho." Amin'ny fipihana eo io dia hitondra antsika any amin'ny efijery iray izay manomboka ny fanarenana ny kaonty. Mila mameno angona sasany isika, mba hahafahantsika mahazo azy io indray amin'ny farany.
Dingana somary lava sy mandreraka izy io, saingy mandeha tsara ary ny zava-dehibe dia izany hanana fidirana mankany Hotmai indray isikatoy izao aho. Ka mila mameno ny saha nangatahin'izy ireo fotsiny ianao.
Amin'ny farany safidy afaka foana isika mamorona mailaka Hotmail.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny ny lakilen'ny Hotmail izay voajirika
Te-hamerina ny mailaka sy ny teny miafiko aho
Rodrigo Ivan Pacheco dia hoy izy:
Ry Sonia malala, naneho hevitra ianao tamin'ny hafatrao tao amin'ilay lahatsoratra hafa, fa mety haneho faharetana izany. Mampalahelo fa mandany fotoana i Microsoft hanamafisana ny vaovao nalefa taminao tamin'ny fomba naroso. Hevitra tsara ny manizingizina ny fangatahana toy izany imbetsaka mba hikajiana ny fangatahana. Misaotra anao tamin'ny fitsidihanao ary mirary vahaolana mahomby amin'ny olanao izahay.
Valiny tamin'i Rodrigo Iván Pacheco
Salama aho mila mamerina ny kaontiko !!! Miankina amiko ny asako rehetra. Tsy manome valiny ahy ny pejy Microsoft. Ahy ny mailaka !!! Manana fitsapana an'arivony aho. Mifandraisa amiko ao lawyerchilotegui@gmail.com na amin'ny telefaona Arzantina 011-57447038 (finday) azafady !!!!!!!
Salama, misy namana manana orinasa ary ilay nitantana ny kaonty no nangalatra azy, miaraka amin'ny mombamomba ny mpanjifa rehetra, inona no azo atao?
Tsy tadidiko ilay teny miafina. Inona no azoko atao
Manoro hevitra anao aho hampiasa cookies. Miankina amin'ny navigateur ampiasainao hampidirana ny mailaka hotmail anao, io no toerana misy ireto cookies ireto. Misaotra tamin'ny fitsidihanao.
z3u5 dia hoy izy:
Serivisy hacker tsara indrindra
RAHA TIANAO HANATRATRA serivisy lehibe sy matoky tena ianao, mifandraisa aminay.
- Password miafina
- Teny miafina ho an'ny tambajotra sosialy
- Teny miafina amin'ny pejin-tranonkala
- Manova ny naotin'ny oniversite izahay
- Manadihady momba ny trangana scam izahay
- mamafa ny tantaran'ny banky izahay
- Toerana misy ny olona
- Toerana misy ny IP'S
FANONTANIANA NA FANONTANIANA IZAY HANATRIKA ANAO
ETO . Iray amin'ireo TROJAN tsara indrindra: FrogRAT amin'izao fotoana izao ary noforonin'ny iray amin'ireo mpanafika tsara indrindra eto MALWARE (Margera)
AZONAO HITANAO NY DETAILY AN'IO TROYAN FABULOUS ITY AO:
NY WEB IHANY NO AZONAO VOAFIDY. TROYAN EAST.
Valio i z3u5
mandefa fampahalalana mba hifandray aminao
Julian Medina dia hoy izy:
Mila mahazo ny teny miafin'ny kaonty facebook aho, afaka manampy ahy ve ianao? inona no tokony hataoko, maika, misaotra
Valiny tamin'i Julián Medina
pavlov dia hoy izy:
Z3U5. Mandefasa vaovao hifandraisanao. Mila manakarama serivisy aho.
Valio amin'i Pavlov
heinnert de diaz dia hoy izy:
tsara fa mila mamerina ny teny miafiko amin'ny mailaka aho, afaka manampy ahy ve ianao?
Mamaly an'i heinnert de diaz
ivelisse Tejada Rodriguez dia hoy izy:
Very ny teny miafiko tsy azoko atao ny mampiditra ny kaontiko ny mailaka ataoko dia missybeli @ hotmail. Com
Mamaly an'i ivelisse Tejada Rodríguez
Karin dia hoy izy:
Nijirika haingana ny kaontiko hotmail aho, novain'izy ireo daholo ny fampahalalana, satria tsy azo atao ny mamerina azy io amin'ny tena toetrako, efa nanandrana aho ary tsy misy afaka manampy ahy
Mamaly an'i karin
Ahoana no hamerenako ny teny miafin'ny mailaka hotmail?
Voankazo Miva dia hoy izy:
Very ny teny miafin'ny mailaka nataoko ary mila sitrana aho satria anjarako izany
Valiny amin'ny Voankazo Miva
Pacobs dia hoy izy:
Fotoana vitsy lasa izay ny zana-drahalahiko dia tsy nampiasa an'io adiresy hotmail (junior0613@hotmail.com) io. Tsy fantatrao intsony ny teny miafina na zavatra hafa. Ny olana dia ny iPhone alefanay hanamboatra azy dia ilay icloud mifandray amin'ity adiresy ity. Iza no afaka manampy ahy hamerina ny teny miafina ... misaotra betsaka mialoha.
Valiny amin'i Pacobs
anna honahona dia hoy izy:
Tsy tadidiko ny tenimiafiko Hotmail, azafady mba afaka manampy ahy hamerina azy io ianao?
Mamaly anna pantano
Nanenjika ahy izy ireo ary nanova ny fampahalalana rehetra (mailaka hafa sy nomeraon-telefaona fifandraisana), ary nampihetsika ny fanamarinana dingana roa hanaparitahana azy ... tsy nisy na inona na inona sisa tavela tao amiko ...
Salama, tsy tadidiko ny teny miafiko Facebook, novahako tamin'ny alàlan'ny kaody, fa raha hanao hetsika vitsivitsy dia mangataka amiko ny tenimiafiko izy ireo, tsy tadidiko koa ilay iray ho an'ny mailaka Hotmail izay toa mitovy, ary ny nomeraon-telefaona napetrako tsy ananako intsony dia mila fantatro izay hatao, misaotra !!
Valio i Luz marina
Daniela ogaz dia hoy izy:
Androany tolak'andro dia manandrana mamerina ny kaontiko izay nosokafako avy amin'ny solosaina finday ary nanokatra ny telefaona finday ary tsy afaka mahalala ny teny miafina aho izao. Nifandray mailaka aho fa tsy afaka manokatra ny mailako. Nanome mailaka mailaka koa aho. com ary milaza fa mandefa kaody izy ireo fa tsy tonga. azafady raha misy afaka manampy ahy misaotra betsaka
Valiny tamin'i Daniela Ogaz
Gimena dia hoy izy:
Salama, tsy tadidiko ny tenimiafiko sy ny isa napetrako, tsy manana izany intsony aho, misy mahalala ny fomba hanaovana xq amin'ilay kaody izay alehanao amin'ny mailaka hafa dia tsy manampy
Valio amin'i Gimena
Midira efa ela be ary aza mampiasa Hotmail. Mpivady tokana. Ataovy facebook aho fa tsy tadidiko ny nomeraon-telefaona na ny mailaka hafa izay manampy ahy azafady
Sonia ramirez aho ary tsy tadidiko ny tenimiafiko Hotmail ary te-hamerina azy io aho manana ny efatra nolazainay tamin'ny telefaona teo aloha, manana numero vaovao aho azafady ampio aho
Marcela mezzina dia hoy izy:
Salama very fanantenana aho satria nanakana ny kaonty HOTMAIL izay efa an-taonako maro izy ireo. Manontany ahy ny angona izy ireo fa tsy tadidiko akory ary napetrako izay noheveriko fa napetrako tamin'io fotoana io. Saingy tsy nisy tamin'ireo andrana ireo no nahafa-po azy ireo ary nosakanany ny kaontiko. Tsy hitako izay hatao, tena kivy aho satria mampiasa izany kaonty izany noho ny antony matihanina sy manokana ary samy manana izany mailaka izany ny tsirairay. Tsy hitako izay hatao, efa nijery Internet nandritra ny andro maro aho, nanandrana nandefa hafatra tany amin'ny Microsolft, saingy voafetra izany safidy izany satria nilaza izy ireo fa tsy misy serivisy vonjimaika ilay pejy. Nosakanan'izy ireo tsy ara-dalàna izany ary tsy nisy fifampidinihana, ary nofoanana izao ary tsy hitako izay hatao. Azafady, mba misy afaka manampy ahy ve? Misaotra anao!!!
Valiny tamin'i Marcela Mezzina
Charles Salazar dia hoy izy:
Salama hariva, eto aho mangataka ny fanampianao, tsy azoko atao ny mampiditra ny mailaka hotmail-ko, ny nomeraon-telefaona napetrako dia tsy ananako intsony ary tsy tadidiko na inona na inona momba ny fanontaniana napetrak'izy ireo tamiko hamerenana izany kaonty izany, toy izany toy ny tenimiafina roa farany nampiasako, amin'ity tranga ity dia iray monja no tadidiko, tsy tadidiko ny resaka filaminana, ireo hafatra farany nalefa. Azafady azafady azafady azafady ny fanampianao satria mila mampiditra maika ny mailako aho.
Valiny tamin'i Carlos Salazar
Salama hariva, nanandrana niditra kaonty hotmail vaovao aho nandritra ny iray volana teo ary nilaza tamiko fa tsy mety ny teny miafina satria valiako ireo fanontaniana tonga tamiko ary mbola tsy hiala amiko io, tsy azoko fa efa nitranga tamiko io ary maika aho fa tokony hakatsoana izy ity satria mailaka iasako io, azafady mba ampio aho ???? Misaotra
Scuf Impact, mpanera pro izay tadiavin'ny mpilalao rehetra
Ahoana no hahalalana hoe iza no miantso ahy amin'ny isa tsy fantatra